မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ပြင်ဦးလွင် ခရိုင်၌ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ယာဉ်တ?? - Yangon Media Group
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ပြင်ဦးလွင် ခရိုင်၌ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ယာဉ်တ??
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပါ ဝင်ပတ်သက်နေသည့်ယာဉ်တိုက်မှုများ အများဆုံးဖြစ်ပွားလျက်ရှိ နေပြီး ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူများတွင် အမျိုးသားဦးရေက အမျိုးသမီးဦးရေထက် ပိုမိုများပြား ကြောင်း အမှတ်(၁၄)ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ သိရသည်။
”တစ်တိုင်းလုံးအနေအထားအရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ယာဉ်တိုက်မှုတွေအားလုံးရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း(လေးပုံသုံးပုံလောက်)ဟာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်ဖြစ်ပွားနေတာကိုတွေ့ရှိရပြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ပြီးတော့ ကျောက်ဆည်ခရိုင်က ဒုတိယအများဆုံးနေ ရာကနေလိုက်နေပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်စီးရေက တစ်နှစ်ထက်တစ် နှစ်တိုးတက်လာပေမယ့် ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့သူအများစုဟာ ဦးထုပ် မဆောင်းတာနဲ့ အာမခံချက်မပေးနိုင်တဲ့ဦးထုပ်တွေကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့အခါ ဦးခေါင်းကိုထိ ခိုက်ပြီးသေဆုံးကြရတာပါ။ ပညာ ပေးမှုနဲ့အတူ စစ်ဆေးအရေးယူမှု တွေကို စီမံချက်ချလုပ်ဆောင်နေ ပေမယ့်လည်း ယာဉ်မောင်းသူတွေ ကိုယ်တိုင်က အသိတရားရှိပြီးတော့ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ကိုလိုက်နာမှသာ ယာဉ်တိုက်မှုတွေက သိသာစွာလျော့ကျသွားနိုင်မှာပါ”ဟု အမှတ်(၁၄)ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနှင့် ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူဦးရေမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးလာခြင်း ဖြစ်ပြီး နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ကာလနှင့် အခါကြီးရက်ကြီးများ၌ ယာဉ်တိုက်မှုများပိုမိုဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၌ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု စုစုပေါင်း ၂၂၃၃ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှ သေဆုံးသူ ၇၈၉ ဦး(အမျိုးသား ၆၄ဝ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၄၉ ဦး)နှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၃၅၆၅ ဦးရှိခဲ့ရာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များပါဝင် ပတ်သက်သည့် အမှုပေါင်း ၁၅၃၆ မှုပါဝင်သည့်အနက် ပြင်ဦးလွင် ခရိုင်တွင် ၅၅၉ မှုနှင့် ကျောက် ဆည်ခရိုင်တွင် ၄၂၁ မှုပါဝင် ကြောင်း အထက်ပါယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး၏မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
မက္ကာသီကို ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရစေခြင်းအတွက် တိုက်စစ်မှူး ရွန်ဒွန် ပြန်လည်တောင်းပန်
မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MoU ဖြင့် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်မြန်မာအလုပ်သမားဦးရေတစ်ရက်တည်း ၁၅ဝဝ ရှိ